China Intomscent fireproof sealant factory na ndị na-emepụta | Weicheng
N'iji emulsion na-adabere na mmiri mee ihe dị ka ihe bụ isi, na-agbanye ebe a na-etinye ya: ịpị njikọ njikọ nke oghere ụzọ ya na ihe siri ike maka igbochi anwụrụ ọkụ. Ansiondị mmụba nke ọkụ ọkụ, iji nweta mmetụta nchebe ọkụ achọrọ, tinye nkedo a kapịrị ọnụ iji chọpụta na ihe mkpuchi ahụ nwere ihe jikọrọ ya na elu nke ọkpọkọ iji nweta ike dị ukwuu. Maka oke mastic, tupu o sie ike, enwere ike wepu ya na mmiri. Na-agbanwe fireproof mkpuchi, ọcha oghere, na-akwadebe itinye FS-m nkwonkwo elu kwesịrị wepụrụ agbasasị irighiri ihe, ájá, mmanụ stains, ntu oyi, wax, wdg, na-akọrọ. Otu akụrụngwa, mmiri na-adabere, acrylic acid nke na-emechi ihe mkpuchi ọkụ bụ nnukwu arụmọrụ na-agbanwe agbanwe. O nwere ike iguzogide oke okpomọkụ na nrụgide dị elu. O nwere ike iguzogide nnukwu okpomọkụ, obere okpomọkụ, ultra-elu, ọkara, obere nrụgide na nrụgide na-adịghị mma, yana oke ọsọ. Otu akụrụngwa akàrà, na-abụghị nyagide, ọchịchịrị-acha ọbara ọbara, nwa mado akara, anaghị sie ike na ụlọ okpomọkụ na ablates na elu okpomọkụ Ọkụ retardant akara bụ ụdị ọhụrụ nke otu akụrụngwa ọkụ sealant. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, iji gboo mkpa nke mmepe nke ụlọ teknụzụ na-azọpụta ike, yana uru nke ngwaahịa ụlọ na nke mba ọzọ, ejiri ihe ndị dị elu na-eme ya.
Aha ngwaahịa Anwụrụ ọkụ na-ekpuchi ọkụ
Nkọwapụta Model 25 PC / igbe
Uru Uru Olu ahụ na-agbasa karịa karịa 5 ugboro na ọkụ, nwere ezigbo mgbanwe na nrapado, ma na-etolite usoro ntanetị dị ukwuu mgbe ọ gbasịrị ọkụ; ọ nwere ike n'ụzọ dị irè gbochie ire ọkụ na okpomọkụ nyefe; elu arụmọrụ ire ọkụ retardant, adaba-ewu
Akụkụ nke Ngwa 1. Mkpa akara nke ndị a gbanwere na mbara ala ndị a gbanwere, mgbidi na-arụ ọrụ, ọkpọkọ ígwè, ọkpọkọ ikuku, ọkpọkọ ihe mkpuchi, na ihe ndị ọzọ. nkwonkwo n'etiti mgbidi dị elu na mbadamba ala; 3. Plastic pipelines (≤50mm) ọdịiche nke ịbanye; ọdịiche nke ịbanye na HVAC duct
Nguzogide oku 120i
N'ozuzu, a na-anwale mkpuchi ọkụ site na usoro kwụ ọtọ. Dika ule nlere anya, enwere ike kewaa ya na FV-0, Fv-1 na Fv-2 site na elu rue ala. Ọ na-bụ-eji maka akara nke ákwà mgbochi ahụ mgbidi fireproof Ọdịdị, na ọ chọrọ ikike nke mgbochi Ndahie deformation na ọkụ na anwụrụ ọkụ mgbochi, Acrylic acid ọkụ na-àmà sealant bụ dakọtara na egbe ụdị. Ihe nkedo a na-enye ọkụ na-egosi ụdị ihe ọkụ ọkụ bụ ụdị polymer plastic sealing ihe maka nkwụnye, nke nwere arụmọrụ abụọ nke akara na ọkụ ọkụ, ma dabara adaba maka ihe ọkụ ọkụ. Ihe owuwu ahụ gụnyere ọkpọkọ ígwè, ọkpọkọ na-ekpuchi ikpo ọkụ na nkwonkwo ụlọ. Ihe nrapado a na-etinye na ibo ụzọ nke ọkụ ọkụ na-egosi enweghị ike iru ihe ọkụ ọkụ chọrọ, Lelee anya na enweghị obere ntụpọ ọcha nke ihe anaghị ere ọkụ na eriri roba. Ọ bụrụ na ị na-eji ihe ọkụ ọkụ na-enwu gbaa, kedu ihe ọzọ, ọ bụrụ na ị wụnyeghị eriri akara, ọkụ ọkụ na ọrụ iche anwụrụ ọkụ nke ọnụ ụzọ ọkụ nchara na-emetụta nke ọma.
Ihe nkedo ọkụ ọkụ na-adaba maka nkwonkwo nkwonkwo dị n'agbata ụlọ na mgbidi, karịsịa maka ogologo njikọ. Ebe ọ bụ na ịgba spraying dị mfe, ọ nwere ike ịchekwa ọrụ mmadụ ma belata ọnụahịa mgbe a na-ewu ya. Mgbe ejiri mmiri sachaa ya, enwere ike ịgwọta ya ma tee ya. Oke kachasị nke nkwonkwo ọkụ na-eguzogide ọkụ nwere ike ịbụ sentimita isii, na arụmọrụ ọkụ nke nkwonkwo nkwonkwo nwere ike iru elekere 2.
Nke gara aga: Fire blanket
Osote: Mgbanwe organic ịkwụnye ihe nke intumescent fireproof sealant